बस दुर्घटनामा १४ घाइते !!!! — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, विशेष, समचार, स्वास्थ्य → बस दुर्घटनामा १४ घाइते !!!!
बस दुर्घटनामा १४ घाइते !!!!
November 27, 2015३९३ पटक
बागलुङ, ११ मंसिर-काठमाडौंदेखि बुर्तिवाङका लागि छुटेको रात्रीबस विहिवार बिहान दुर्घटना हुँदा १४ यात्री घाइते भएका छन् । जिल्लाको विहुँ गाविस–२ को किम्बोट भन्ने स्थानमा ना ४ क ९२१७ नम्बरको बस बिहान साँढे ६ बजे सडक देखि ५० मिटर खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले बतायो । विहिवार साँझ काठमाडौंबाट छुटेको उक्त बस विहान साँढे ६ बजे खसेको हो । उक्त बसमा २५ जना सवार थिए ।
बस दुर्घटनामा परेको थाहा पाएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको प्रहरी टोलीले उद्दार गरेको प्रनाउ चक्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए । घाइते बुंगादोभान–५का गोपाल छन्त्याल, बुंगादोभान–६ की भीमकुमारी उपाध्याय, र बुंगादोभान–७ का दीपक विक छन् । त्यस्तै अधिकारीचौर–३ का माधव कंडेल र रोजिना सिर्पाली, देविस्थान–९ का भीमलाल शर्मा, धनिश्वर शर्मा, र देविस्थान–१ का पारस भण्डारी तथा बीरबहादुर गुरुङ घाइते भएका छन् । बुर्तिवाङ–१ की मिनु कुँवर, जगप्रसाद शेरचन, तमानका पुनम रसाइली, भीमगिठेका कृष्ण आचार्य र दुदिलाभाटीका तेजेन्द्र कुँवर घाइते भएको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले जनायो ।
सडकको अवस्था राम्रो भएको स्थानमा बस खसेकोले चालकको लापरवाही हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । ‘चालकको लापरवाहीले घटना भएको हो’ घाइते छन्त्यालले भने, ‘पटक–पटक नराम्रो व्यवहार देखाएको थियो, उज्यालो हुँदा बुर्तिवाङ पुग्नुपर्नेमा ढीला पनि गरेको थियो ।’ घटनास्थल सदरमुकाम देखि १२ किमी पश्चिममा पर्छ । इन्धन अभावले गाडी नचलेकोले घटनास्थलमा प्रहरीकै गाडी पुगेर उद्दार गरेको थियो । सबै घाइतेलाई धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । अधिकांश घाइतेको छाती र हातखुट्टामा मात्र चोट लागेकोले बागलुङमै उपचार गरिने अस्पतालका निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट श्रीकृष्ण भट्टले बताए ।